t-mobile eziqongweni ku & t ukuba ube othwala wesibili ngobukhulu engenantambo ku U.s.
none Izindaba Nokubuyekezwa I-T-Mobile iphakamisa i-AT & T ukuba ibe yisithwali sesibili ngobukhulu esingenantambo e-U.S.
I-T-Mobile iphakamisa i-AT & T ukuba ibe yisithwali sesibili ngobukhulu esingenantambo e-U.S.
Umbuzo osheshayo, yimuphi umphathi wase-U.S. Ongumhlinzeki ongenawaya wesibili ngobukhulu ezweni? I-AT & T, akunjalo? KUNGALUNGILE. Ngenxa yekota lesibili elinamandla amakhulu, i-T-Mobile manje isiyinombolo yesibili ezifundeni ezineVerizon kuphela ngaphambi kwayo.
Ngesikhathi sekota yesibili yenkampani irekhode okungeziwe okungama-253,000 kwefoni okukhokhelwe ngemuva kwenani lika .80%.
Izengezo ezikhokhelwe kusengaphambili zaba ngu-133,000 ngenqwaba ka-2.81%. Ingqikithi yokwengezwa kwenani kwezigidi eziyi-1.25 ibingcono kakhulu embonini enikeza abathengi beT-Mobile 98.3 million ekupheleni kwekota yesibili yekhalenda. Leli inani eliphelele lesibili ngobukhulu embonini. Ngonyaka odlule, inani eliphelele lamakhasimende e-T-Mobile lenyuke cishe ngamakhasimende angama-33,000 noma ama-49%.
Ezingxenyeni ezilandelanayo ezingama-22, i-T-Mobile iholele le mboni kwizengezo zamakhasimende eziphelele ezinophawu
Esikhathini esiyizinyanga ezintathu esimboze u-Ephreli kuya kuJuni, iT-Mobile ikhiqize imali engamaRandi ayizigidi eziyizinkulungwane eziyi-17.7 ngemali engenayo engenayo enesisindo esingu- $ 110 million. Inkampani ithole amasenti ayi-9 ngesabelo ngasinye ngokuhlanjululwa. Ngaphandle kokufaka i-AT & T ngenani lamakhasimende, i-T-Mobile ingumhlinzeki omkhulu we-5G e-U.S. Enabantu abangaphezu kwezigidi ezingama-250 abambozwe amakhilomitha-skwele ayizigidi eziyi-1,3 (amadolobha namadolobha angama-7 500). Lokho kusho ngokuya kokuma kwezwe, i-T-Mobile & apos; s 5G isembathisa ingubo kabili inani elikhombisa i-AT & T & apos; s 5G futhi idlula kakhulu ukumbozwa kwe-Verizon & apos; Lokho kungenxa yokuthi i-T-Mobile & apos; s 600MHz low-band spectrum ihambela kude futhi ingena ezinhlakeni ezingcono kuneVerizon & apos; s mmWave spectrum. Ama-airwaves akamuva aletha isivinini esisheshayo se-5G kune-low-band kepha angahambi ibanga elide. I-T-Mobile ihlela ukusebenzisa inhlanganisela ye-low-band spectrum, ama-airwaves ama-2.5GHz maphakathi nebhendi ayithathe eSprint, nezimpawu eziphezulu zebhendi mmWave ukunikeza inethiwekhi esheshayo ye-5G eMelika. Abanye abahlaziyi nabo bayabona umphathi ukuhlinzeka izwe ngesivinini sedatha sokulanda esisheshayo esingu-5G njengoba ubuchwepheshe bukhula.
Isikhulu samanje seT-Mobile uMike Sievert ngakwesobunxele noJohn Legere ngakwesokudla
Ukuhlanganiswa kwe-T-Mobile-Sprint kuvaliwe ngekota kwathi u-10% we-Sprint & apos; s traffic postpaid usuvele wadluliselwa kwinethiwekhi ye-T-Mobile. Lokhu bekuyi-T-Mobile & apos; ikota yokuqala yekhalenda kusukela ku-Q2 ka-2012 ngaphandle kukaJohn Legere njenge-CEO. Isikhulu sehle esikhundleni ngemuva kokuvalwa kokuhlangana neSprint futhi indawo yaso yathathwa ngumuntu obeyisandla eside sokudla uMike Sievert. Ekhuluma ngoSievert, umphathi wamanje we-T-Mobile uthe, 'Ukudlula i-AT & T ukuze ube ngu- # 2 bekuyingqophamlando enkulu yokuqalisa i-Q2, kodwa lokho bekuyisiqalo nje! Kwikota yethu yokuqala njengenkampani ehlanganisiwe, i-T-Mobile iholele le mboni kumakhasimende anegama eliphelele engeza - ngisho nasendaweni enenselelo - futhi akungabazeki ukuthi siyinkampani yokukhula ehamba phambili ku-wireless. Manje sesibeka izinto zethu ku- # 1 - ekukhetheni kwamakhasimende nasezinhliziyweni zamakhasimende - futhi sizofika lapho ngokwenza KUPHELA okungenziwa yi-Un-carrier: ukunikeza amakhasimende inethiwekhi ye-5G ethuthuke kakhulu nenani elihle kakhulu ngenkathi uqhubeka yenza izinyathelo ezinkulu ezilungisa amaphuzu obuhlungu bamakhasimende futhi ziphazamise le mboni. Ngijabule ngalokho okuzayo kule nkathi entsha ye-T-Mobile - sisaqala nje! '
Emuva ngo-Agasti 2015, iT-Mobile ekugcineni yaphuma ngaphandle kwesela ukudlula i-Sprint endaweni yesithathu e-U.S. Futhi iT-Mobile iyaqhubeka nokusuka emandleni iye emandleni; ikota yesibili esanda kumenyezelwa kwakuyikota yama-22 elandelanayo eyayineT-Mobile ehamba phambili ekwengezelweni kwamakhasimende okuphelele. Lokho kusho ukuthi kule minyaka emihlanu nengxenye edlule, iT-Mobile ihole imboni yase-U.S engenazintambo kulesi sigaba.
Ngemuva kokwethula inethiwekhi yokuqala ye-5G ezweni lonke e-U.S, i-T-Mobile igxile ekunikezeni umuzwa omuhle womsebenzisi we-5G kumakhasimende ayo. Ngokuya nge-Open Signal, amakhasimende we-T-Mobile akwazi ukufinyelela isignali ye-5G kabili kaningi njengababhalisile be-AT & T, nezikhathi ezingama-56 kaningi njengamakhasimende eVerizon. Umbiko ovela ku-Ookla uphawula ukuthi i-T-Mobile inenhlanganisela ye-5G ephindwe kane inani lamadolobha ahlanganiswe yi-AT & T neVerizon kuhlangene. Futhi i-T-Mobile ithi amakhasimende abo adlala ngedivayisi enamandla we-5G ajabulela ukulanda okusheshayo nokulayisha okuphelele kunamakhasimende eVerizon.
Amasheya akwa-T-Mobile & apos; afike phezulu kakhulu ngemuva kwesimemezelo semali engenile. Ekuhwebeni kwangemuva kwamahora isitoko besishintsha izandla cishe ku- $ 114, kukhuphuke ngaphezu kuka-5% kusukela ekuvalweni kokuhweba okujwayelekile.
ukubuyekeza kwe-apple ipad pro 12.9
ulwesihlanu olumnyama 2016 iphone 7
I-iPad Air 4 vs iPad Pro: iyiphi oyothenga?
I-Samsung Galaxy Note5 vs LG G4
Imibala emibili ye-Apple AirPods Max ithengiswa ngentengo ephansi kunanini ngaphambili
I-Pixel 6 & 6 Pro: Ingabe i-Samsung ne-Apple kufanele zikhathazeke?
I-Google ihlola izici ezimbili zabasebenzisi be-YouTube beselula
I-iPhone SE 2020: Ukubuyekezwa Kwesikhathi Eside
Imephu yokufaka inethiwekhi ye-AT & T 5G / 5G E: imaphi amadolobha ahlanganiswayo?
Isivumelwano sokumangaza sehlisa amanani we-iPhone 11, 11 Pro, no-11 Pro Max ngo- $ 150 ngezitolimende